Harry Potter bhanya na manqaku ezininzi umboniso ngempumelelo lonke ixesha. Uninzi lweziqendu ezivela kwiifilimu zikaHarry Potter zadutyulwa ngaphakathi kweLondon uqobo. Nokuba ungumntu okhutheleyo wefilimu kaHarry Potter okanye uthotho lwencwadi, London ngokungathandabuzekiyo indawo engcono Ndingaveleli na ke ngenxa lakwa- amava Harry Potter. Ufuna ukwazi ukuba yintoni 5 Iindawo Ndingaveleli na ke ngenxa yenu Harry Potter Weekend eLondon? Gcina A Uloliwe iye yayila le luhlu ukwenza wizarding yakho adventure i eyodwa lula yaye inika umdla kakhulu!
Le nakho ultimate kwiincwadi zethu! Jonga isandla yokuqala libeka, zedrama, nezinxibo ezisetyenziswa yonke Harry Potter bhanya! Inyathelo ngaphakathi kwezinye iindawo ifilimu kubandakanya; The Hall Great, Dumbledore office, and Hagrid hut.
ukufumana phi le? intloko phezu ukuya Warner Bros. Studios Tour London. The Making of Harry Potter yeyona itsala karhulumente Leavesden-mpuma England. Not to be confused with the Wizarding World of Harry Potter of Universal Studios iipaki zemixholo. It is a umboniso osisigxina umnikelo lakwa- emva imiboniso akrotyiswe Harry Potter bhanya. Yiba usuku omlingo anikhuphe emva emfihlekweni umbonisa Harry Potter iifilimu e Warner Bros. Studio Tour London.
Phakathi Kings Cross Station, i enkulu Isikhululo sikaloliwe eLondon ukuba oololiwe Edinburgh eScotland, a utsalo lwezotyelelo iye yasungulwa, nge imithwalo Sibona inxenye ibephakathi eludongeni, apho ungaphinda-okumisa eyakho Harry Potter mzuzu yakho.
Between the hours of 9 am and 9 pm unako ukuhlawula ukuba umfoti ngobuchule kunye nomncedisi uncedo ufumana isithombe okungcono, complete with a Harry Potter scarf and/ or wand. Nawe ungakwazi ukuthatha ifoto yakho apha for free.
Ukuba ungatyelela kuphela ngeeyure zikaxakeka kunye nemali spare, you may wish to consider purchasing a VIP Photo Pass lanyard. Oku kubandakanya inkundla 9 ¾ yenkomo, your photograph, and queue jump, bonke ngenxa £ 20.
Yintoni Harry Potter Weekend eLondon ngaphandle ngokuzama i kukungxawu? Le Imilingo Cocktail Experience kuyinto 1 hr 45 min class immersive ku London. Andaz izambatho zakho, grab your wands, and get ready for your most spirited Potions class yet, nale ogxile Imilingo Experience Cocktail for ababini The kukungxawu, London.
Kwisikhululo umsebenzi wakho interactive, uya kufumana sivavanye loya wand ngokugalela isiselo wamkelekile. Uya kwandula sebenzisa izakhono ezizodwa mixology molekyuli ukuba asile elixirs yakho emnandi, ngasinye oya kuba iimpawu ezahlukeneyo kunye neziphumo. Zilungiselele ukuba ukubaphazamisa magic ezinye kwi abaninzi amava ingane cocktail eLondon!
Utywala-free, gluten, and vegan options all available
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Iindawo To Visit Bakho Harry Potter Weekend In London” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fharry-potter-weekend-london%2F%3Flang%3Dxh– (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#HarryPotter adventure europetravel Iifayile zeHarryPotter London travelbytrain wizard